ပင်းတယ လှိုဏ်ဂူ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရာများ
ပင်းတယ လှိုဏ်ဂူ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရာများ ပင်းတယ လှိုဏ်ဂူ၏ အံ့ဖွယ် ထူးခြားချက်များ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျော်ကြားဆုံး (၁၀)နေရာထဲက တစ်ခု အပါဝင် ဖြစ်သည့် ပင်းတယဂူ၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွား စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ထင်ရှားဖော်ပြခဲ့သည့် ပင်းတယ ဂူသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်းတယမြို့တွင် တည်ရှိ သည်။ ပင်းတယဂူသည် ထုံးကျောက်တောင်တွင် သဘာဝ အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ဘူမိဗေဒသက်တမ်းနှင့် ဆိုလျင် လွန်ခဲ့သော နှစ် သန်း ၂၀၀ တည်းက ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မြင့်မားတဲ့ တောင်စောင်းကနေ တောင်မြောက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဂူ သုံး ဂူ ရှိတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ တောင်ဘက် အကျဆုံး ဂူတစ်ခုသာ …
ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သရဏဂုံ တင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သရဏဂုံ တင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် သရဏဂုံ ကွယ်လွန် ပြီးနောက် အလောင်းကို သရဏဂုံ တင်မှုဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ ရဲ့ ထုံးစံ တစ်ခုဖြစ် နေ ပါ ပြီ ။ ဘယ် လောက် ပဲ ဆင်းရဲ နိမ့်ပါး ပါစေ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု တွေက သရဏဂုံ တင် ဖြစ် အောင် ကြိုးစား တတ် ကြ ပါ တယ် ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အ လောင်းကို သရဏဂုံ တင်ခွင့် မရ လိုက် တဲ့ အခါ မျိုး မှာ …
အသားတုကို ဘယ်ကနေရတယ်လို့ထင်လဲ..?? အသားတုဟာ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ တော်တော်လေး အသုံးတွင် ကျယ်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ လမ်းဘေးတုတ်ထိုး ဆိုင်လေးတွေ၊ အကင်ဆိုင်လေးတွေ ကစပြီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ အသားတု ဟင်း ၊ အသားတု ဗလချောင်ကြော်လေး စသည်ဖြင့် အသုံးတွင် ကျယ်လှ ပါတယ်။ အသားတုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာမက အာရှမှာတော်တော်များများ စားကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတေ့ာသက်သက်လွတ်ဟင်းပွဲတွေမှာ အများဆုံး တွေ့မြင်ရတတ် ပါသတဲ့။ လူတိုင်းနီးပါး ကြိုက်တဲ့ အသားတုကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ ဆိုတာရော တွေးကြည့် ဖူးလား ? မသိသေးဘူး ဆိုရင် ပြောပြ မယ်နော် . . . အသားတုကို …
ချစ်တဲ့ သူကို သတိရတဲ့အခါ မေတ္တာပို့ ပေးပါ
ချစ်တဲ့ သူကို သတိရတဲ့အခါ မေတ္တာပို့ ပေးပါ ချစ်တဲ့သူကို သတိရတဲ့အခါ ချစ်သူကို သတိ ရတဲ့ အခါ ဘာလုပ် ရမလဲ ‘ လို့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က မေးပါ တယ်။ ဒီတော့ မေတ္တာပို့ပါ’ လို့ ဖြေပေး လိုက်ပါ တယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက် အေးချမ်းပါစေ ။ ဘေးအန္တာရယ်တွေ က ဝေး ပါစေ ။ စိတ်မဆင်းရဲ ပါစေနဲ့။ ခန္ဓာ့ဆင်းရဲကို မခံစား ရပါစေ နဲ့ ။ လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင် ပါစေ ။ ကြံစည်တိုင်း ဖြစ်ထွန်း ပါစေ ။ လူမိုက်တွေ …
မကျော်သင့်သော စည်း လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ စည်းလေး တစ်ခုတော့ ထားပေးပါ သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူ ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်နှမကြား မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး မိဘနဲ့ သားသမီးကြား မှာတောင် စည်းလေး တစ်ခုရှိ ရပါမယ် ။ လိုတာထက် ပိုမဝင်မိစေဖို့… သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုယ်ပိုင် ခံယူချက် သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့် သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက် သူ့ရဲ့ပြင်လို့ မရတဲ့ ဗီဇနဲ့ စရိုက်တွေ အတွက် ကိုယ်က ဝင်ရောက် သင့်တဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုပြီး မဝင် မိစေဖို့…. မေးသင့်မေး ထိုက် တာထက် ပြောသင့်ပြောထိုက် တာထက်ပိုပြီး ဘောင်တွေ မကျော်ဖို့ အတွက် စည်းတစ်ခု ထားကို …
Previous 1 …910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 275 Next